पाँचसय वर्ष पुरानो गणे,शको मु.र्ति फेला, बेवास्ता नगर्नुहोला? पढेर ॐ लेखि शे’यर गरौं – Sanjal Nepal
Homeरोचकपाँचसय वर्ष पुरानो गणे,शको मु.र्ति फेला, बेवास्ता नगर्नुहोला? पढेर ॐ लेखि शे’यर गरौं
November 19, 2020 admin रोचक 6617
असावधानीका कारण उक्त मूर्ति भने टुक्रिएको छ । टुक्रिएको मूर्ति पुरातत्व विभागको सहयोगमा जोड्न लागेको स्थानीय कृष्णप्रसाद मानन्धरले बताए । हजुरबुबा तुलसी नारायण माननधरले २०२२ साल तिर न्यास पूजा गरि ढुगांको पुरानो मुर्ति माथि पितलको गणेशको मुर्ति स्थापना गरेको उहांको भनाइ छ । फेला परेको गणेशको मुर्ति दुई हाते हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।आइतबार : पुरुष : आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ ।स्त्री : आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । द्द।सोमबारः पुरुष स् सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छसोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।
नेपाल जान्छु भन्दा सधैं पि’ट्थ्यो, ११ वर्ष देखि साउदी घरमालिकले ब’न्धक बनाएको महिलाको यसरी गरियो उद्दार
November 13, 2020 admin रोचक, समाचार 24886
February 6, 2021 admin रोचक 6413
एजेन्सी । नोभेम्बर २५ बलिउड कलाकार राखि सावन्तको जन्मदिन हो । बलिउडमा राम्रो नतर्कीका रुपमा सबैले राखी सावंतलाई चिन्छन्। उसको धेरै फ्यान छन् । आज राखीलाई कुनै अभाव छैन । नाम दाम सबै छ ।
December 10, 2020 admin रोचक 3266